Talen’ny fahitalavitra Alzeriana nitory ireo mpanao gazety tsy miankina ho manala baraka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Desambra 2018 6:03 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, Español, English, Português, English
Sary hosodokon’ny filoha Alzeriana Abdelaziz Bouteflika, 82taona, izay mikasa ny hitondra fanin-diminy indray. Sary : Thierry Ehrmann, miaraka amin’ny fahazoan-dalana avy amin’i Organ Museum
Navotsotra tamin’ny 8 Novambra 2018 ny mpanao gazety Alzeriana miisa roa, rehefa nigadra roa herinandro mahery noho ny fiampangana azy ireo ho nanao fanalam-baraka.
Nosamborin’ny polisy i Abdou Sammar, lehiben’ny toniandahatsoratra ao amin’ny Algérie Part sady mpandray anjara tato amin’ny Global Voices fahiny, niaraka tamin’ny iray tamin’ireo mpanao gazety ao amin’ny tranonkala Merouane Boudiab, ny 23 Oktobra, rehefa nametraka fitoriana noho ny fanalam-baraka nataon’izy ireo i Anis Rahmani, talen’ny fahitalavitra tsy miankina Ennahar, Nametraka fitoriana hafa ihany koa ny governoran’i Alzeria, Abdelkader Zoukh.
Nanome baiko ny hamotsorana ireo mpanao gazety roa ny fitsarana any Alzeria eo am-piandrasana ny fanadihadiana fanampiny. Nitaky herintaona an-tranomaizina sy onitra 100 000 dinars Alzeriana (738 euros) ny fampanoavana raha nitaky onitra mitentina 2 tapitrisa (14.760 euros) sy 50 tapitrisa dinars(369.000 euros) kosa ny mpisolovava an’i Rahmani sy Zoukh tao anatin’ny fitoriana sivily natao an’ireo mpanao gazety.
Nanao tatitra lehibe momba ny fitoriana kolikoly namely an’i Zoukh ny Algerie Part. Nitsikera an’i Rahmani ihany koa ny vohikala sy ny vondrona fampitam-baovao ao aminy sady nitatitra fa nanaparitaka lainga sy fahadisoana ny fahitalavitra Ennahar. Na izany aza anefa dia tsy nisy tamin’ireo mpitory no nilaza ampahibemaso ny zavatra hitany fa nanala-baraka tao amin’ny lahatsoratry ny Algerie Part.
Na dia anisan’ny sehatra tsy miankina aza ny Ennahar dia heverina fa manana fifandraisana akaiky amin’ny mpitondra izy. Mila mahazo alalana avy amin’ny fanjakana hiasana ireo fampielezam-peo tsy miankina any Alzeria mba ahafahany miasa. Nanoratra ny Freedom House tao amin’ny tatitra isaky ny firenena natao tamin’ny taona 2016 fa ‘’mametra ny fahafahan’ny fahitalavitra tsy miankina manome fandaharam-baovao mahaleotena amin’ny ampahany noho ny famerana ny fotoana voatokana handefasana ny vaovao’’ ity fitsipika ity.
Namaritra ny famoaham-baovaony ho ‘’mahaleotena tanteraka’’ny Algérie Part izay mifototra amin’ny “soatoavin’ny olompirenena’. Nanome lohalaharana ny fitateram-baovao sy ny vaovao mifandraika amin’ny fampandrosoana, ny rariny, ny zon’olombelona, ny hetsi-panoherana ara-tsosialy sy ara-toekarena, ny fitantanana ary ny kolikoly ny tranonkala. Manohana mazava ny zo haneho hevitra malalaka ihany koa izy .
Niharan’ny fanentanana fandrahonana tao amin’ny Aterineto sy ny fanafihana an-tserasera ny Algérie Part sy ireo mpanao gazety miaraka aminy ,talohan’ny fisamborana azy ireo.
Ny 17 Oktobra, ny Fikambanana miaro ny zo nomerika Internet Sans Frontières ao Paris, izay hiasan’i Semmar ho mpitati-baovao dia namoaka fanambarana manameloka ny fanentanana :
Tena manahy mafy ny Internet Sans Frontières noho ny fitomboan’ny fampielezana ny fanentanana amin’ny fandrahonana an-tserasera , anisan’ny niharan'izany ireo bilaogera sy ny mpanao gazety ary ny mpikatroka izay nanadihady ny fitantanana tsy mandeha amin’ny laoniny, indrindra fa ny kolikoly, eo anivon'ny Fanjakana sy ny raharaham-barotra any Alzeria. Izany indrindra no nahazo ireo mpanao gazety ao amin’ny tranonkala fanadihadiana Algerie-Part izay matetika iharan’ny fanafihana fanalam-baraka, ny fandrahonana, ny fampiharana didim-pitsarana tafahoatra, ny fanafihana DDOS, ny fandrahonana tsy mitsahatra amin’ny Aterneto.
Tsy vao voalohany izao no niharan’ny fandrahonana toy izany i Semmar. Nofoanana noho ny fanerena ara-politika ny fandaharana mpanaraby iray tao amin’ny fahitalavitra izay nandraisany anjara, tamin’ny taona 2015.
Nosamborina ihany koa ny mpanao gazety fahatelo, Adlène Mellah, talen’ny tranonkalam-baovao Algerie Direct sy Dzair Presse, tamin’ny 22 Oktobra, daty nifanandrify tamin’ny andro nasionalin’ny fahalalahan’ny gazety ao Alzeria. Narahin’ny foriana avy amin’i Rahmani ihany koa ny fisamborana azy. Mbola any am-ponja izy ary tokony niakatra fitsarana tamin’ny 11 Novambra. Nosamborina ihany koa i Mellah sy ny lehiben’ny toniandahatsorant Khelaf Benhadda ny volana Jona 2018 noho ny fitantarana ny raharaha momba ny fivarotana rongony an-tsokosoko .
‘Tsy mpifahavalo isika’
Maty noho ny fitokonany tsy nihinan-kanina ilay mpanao gazety Alzeriana sady bilaogera Mohammad Tamalt ho fanoherana ny fisamborana azy tamin’ny volana Desambra 2016. Nanefa sazy roa taona an-tranomaizina i Tamalt tamin’io fotoana io, noho ny namoahany tononkalo sy lahatsary tao amin’ny Facebook izay nisy votoaty voalaza fa nanohintohina ny filoha Bouteflika sy ny Praiminisitra Abdelmalek Sellal.
Mbola manjazovazo ihany ny toeran'ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety, roa taona taorian’ny nahafatesan’i Tamalt. Niharan’ny fandrahonana ara-pitsarana avy amin’ireo manampahefana ao amin’ny fanjakana ny feo sy ny mpanao gazety mahaleotena izay mitatitra kolikoly, ny fihetsika tsy mendrika ataon’ny polisy, sy ny fihetsiketsehana, sy ireo izay nanoratra momba ny filoha Abdelaziz Bouteflika, izay teo amin’ny fahefana hatramin’ny taona 1999.
Nanameloka ilay bilaogera Merzoug Touati folo taona an-tranomaizina ny fitsarana tao Bajaia tamin’ny volana Mey tamin’ity taona ity, noho ny fanaovana tatitra sy famoahana fanadihadiana an-tserasera ny antsafa niarahana tamin’ny tompon’andraikitra Israeliana iray tao anatin’ny fitantarany ny hetsi-panoherana fifehezan-kibo tamin’ny fiandohan’ny taona 2017.
Nandany 17 volana an-tranomaizina i Said Chitour, mpanao gazety mahaleotena sady mpanitsy ny fampahalalam-baovao iraisampirenena, anisan’izany ny BBC, France 24, ary ny Whashington Post. Niampanga azy ho ‘’nandefa vaovao tany amin’ny fanjakana vahiny’’, izay heloka bevava, ny manampahefana ary mety hahazo fanamelohana higadra mandra-pahafaty araka ny andininy faha 65 ao amin’ny fehezan-dalana famaizana , hoy ny Reporters Sans Frontières .
Nanamafy ‘’ny maha-zava-dehibe ny fampivoarana ny asa fanaovan-gazety matihanina sy mahaleotena’’ ao amin’ny firenena ny filoha Bouteflika tao anatin'ny hafatra nalefany ho an’ireo mpanao gazety Alzeriana tamin’ny andro nasionalin’ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety,. Na izany aza anefa dia mbola mametraka ny mpanao gazety sasany ho fahavalony ny fitondrana Alzeriana.
“Fihetsika feno fitiavan-tanindrazana ny fiampangana ny kolikoly sy ny kiantranoantrano. Tsy fankahalana ny firenenay izany”, hoy i Semmar tao amin’ny lahatsary iray talohan’ny andro nisamborana azy. ‘’Tsy fahavalon’ny Alzeria izahay, mpisehatry ny fahamarinan-toerana izahay, sy mikatsaka ny hitarihana ny firenena mankany amin’ny lalàna marina’’
Raha nandray ny hafatr’i Bouteflika ho «miabo » izy dia niantso ny manampahefana hanaja ny zon’ireo mpanao gazety :
Tsy ny fanomezam-boninahitra mandritra ny lanonana no atao amin'ny mpanao gazety. Fa ny fanajana ny fahamendrehany sy ny fahalalahany, ary ny fahafahany miasa ao anatin’ny rafi-pitsarana [mifanaraka amin’izany].
Hatao amin’ny volana Aprily 2019 ny fifidianana, ary mbola hikasa ho filoham-pirenena fanindiminy indray i Bouteflika eo amin’ny faha- 82 taonany. Manahy ny mpanao gazety fa vao mainka hihamafy ny famoretana amin’ny fikasana hanakenda ny vaovao rehetra sy ny fanadihadiana fitsikerana ireo mpitondra mitady ny fomba handaniana azy indray amin’ny fifidianana.